यी हुन् ड्राइभर बिनाको कारमा कलेज जाने विश्वकै एकमात्र विद्यार्थी ! – ramechhapkhabar.com
यी हुन् ड्राइभर बिनाको कारमा कलेज जाने विश्वकै एकमात्र विद्यार्थी !
एरिजोनामा बस्ने काएला ज्याक्सन संसारकी एक्ली त्यस्ती विद्यार्थी हुन्, जो हरेक दिन आफ्नो घरबाट ड्राइभरल्यास कारमा कलेज जाने गर्दछिन् । उनी हरेक बिहान आफ्नो सेल फोनबाट एपको प्रयोग गरेर यो ड्राइभरल्यास कार बुक गर्दछिन् ।
पाँच मिनेटको फरकमा नै गूगलको प्यारेटिङ्ग कम्पनीमा सामेल अल्फाबेट आइएनसीका अटोनोमस ह्वीकल आर्मले ल्यास भएको एक कार उनको ढोकामा आइपुग्छ । उनी ढोका खोलेर सीटमा बस्छिन् । त्यसपछि कारले सुरक्षित गतिमा सेट गरिदिन्छ । उनी यसका लागि हरेक दिन पाँच डलर खर्च गर्दछिन् ।